Waraysi ku saabsan middeynta qoysaska soomaalida ee Sweden | Somaliska
Shabakada Somaliska.com ayaa waxaa ay waraysi ku saabsan arrinta middeynta qoysaska soomaaliyeed la yeelatay mudane C/risaq Maxamed Xuseen oo degan magaalada Eskilstuna ee dalka Sweden. C/risaq waa aqoonyahan wax ku bartay wadankan Sweden, waana xildhibaan ku jira golaha deegaanka ee magaalada Eskilstuna. Waxaa kaloo uu ka mid yahay dadka u ololeynaayey in dowlada Iswiidhan ay shuruudaha adag ee dadka soomaaliyeed la saaray laga qaado. Mudane C/risaq waxaa uu qoray maqaalo badan oo afka Swedishka ah oo uu dadka iyo dowlada iswiidhan ugu sharaxaayo dhibaatada ay keentay kala maqnaanta qoysaska soomaaliyeed. Kani waa mid ka mid ah qoraalada badan ee c/risaq oo ku qoran afka Iswiidhishka. http://folket.se/asikter/debatt/1.886334
Haddaba sida ay dad badani la socdaan waxaa ay dowlada Iswiidhan iyo xisbiga cagaarani ku heshiiyeen in Qoysaska soomaaliyeed la middeyn doono laga bilaabo 1-da julay ee 2012-ka. Si aan arinkaas faahfaahin iyo sharaxaad uga helono ayaan waxaan waraysi la yeelanay mudane C/risaq Maxamed Xuseen. Waraysigiina waxaa uu u dhacay sidaan.
1. Sidee u aragtaa go’aankii ay ku dhawaaqeen dowlada iyo xisbiga Miljöpartiet?
C/risaq: Run ahaantii waa go àan aad iyo aad aniga iyo dad badan oo soomaaliyeedba u farxad geliyey. Waana go`aan soo nooleeyey rajadii ay dadka soomaaliyeed ka qabeen iney ubadkoodii iyo ehelkoodii la midoobaan. Arintuna ma aha mid iskeed u xalisantay ee waxaa loosoo galay dadaal dhinacyo badan taabanaaya. Dadka soomaaliyeed, kuwa caruurta iyo ehelku ka maqan yihiin iyo kuwa kaleba aad iyo aad ayey uga qayb qaateen ololihii loogu jirey sidii dowlada loo fahamsiin lahaa dhibta ay shuruudan adagi leedahay. Sidaad la socotaan waxaa la sameeyey mudaaharaadyo, waxaa la dhisay dallado kala duwan oo arinkaan ka shaqeeya, waxaa la sameeyey qoraalo kala duwan, waxaa lala kulmay siyaasiyiin iyo xildhibaano, waxaa la tegey baarlamaanka. Marka dadaalkaas la galay iyo xukunka ilaahay baa xalkaan suurto geliyey. Waana mid lagu farxo.
2. Qaabkee ayaad isleedahay dowladu way ku xalineysaa arintaan? Talaabooyin noocee ah ayey dowladu qaadeysaa?
C/risaq: Dowladu waxaa ay mareysaa qaab u degan baarlamaanka oo la isticmaalo kolkii la doonaayo in sharci la bedelo. Qaabkaasna waa waajib in la maro haddii kale sharci bedelidu waxaa ay noqoneysaa mid aan sharciga waafaqsanayn. Arinkan waxaa iska kaashanaaya Waaxda arimaha bulshada ee baarlamaanka iyo waaxda sharciyada ee baarlmaanka. Waxaana ay u saarayaan gudi soo diyaariya qoraalka sharci bedelida ah ee baarlamaanka la horgeyn doono.
Aqoonyahano ku xeeldheer ayaa loo saarayaa, ka dibna fadhiyo badan ayey qaadan doonaan si ay usoo diyaariyaan qoraal sharci oo miisaaman oo ay ku caddahay in qofka aan dhalashadiisa ku caddayn karin baasaboor ama teesare, duruufo jira awgeed uu dhalashadiisa ku caddayn karo qaab kale sida DNA. Qoraalkaas waxaa la filayaa in baarlamaanka la horkeeno bisha Maarso ee 2012-ka. Wax dhib ahina kama imaan doonto oo baarlamaanku wuu ansixinayaa maxaa yeelay horey baa sidaas loogu heshiiyey. Xisbiyada dowlada iyo xisbiga cagaaran ee heshiiyey ayaa si wadajir ah u ansixinaaya, ka dibna waa la dhaqanh gelin doonaa. Sida caadiga ahna dhaqangelinta shuruucda cusub waxaa ay bilaamaan 1-da bisha July.
Sharcigaanina kama duwana oo waxaa uu dhaqan geli doonaa 1-da july 2012-ka. Maalinta uu dhaqan galo waxii ka dameeyana fulintiisii ayaa bilaaban doonta. Bisha July waa wakhtiga xagaaga ee dalka Iswiidhan intiisa badani ay fasaxa yihiin, balse waxaan aaminsanahay in bishaasba aakhirkeeda dad soo geli doono. Dadka intooda badanise waxaa ay imaan doonaan laga bilaabo bisha Agoosto oo ah marka fasaxa laga soo noqdo. Magaaladan Eskilstuna ee aan deganahay, waxaan marhore wargeliyey qaybta iskuulada si ay ugu talo galaan caruur gaareysa ilaa 80 cunug oo aan fileyno iney magaalada Eskilstun imaan doonaan.
3. Ma la dhihi karaa arinta Soomaalida meel ayay u dhacday hada?
C/risaq: Haa Arintu guud ahaan waa xalisantay ayaan dhihi karaa, balse weli arimo yar-yar oo faahfaahin u baahan baa jira, tusaale ahaan dadka isqaba oo aan caruurta isu lahayn iyo ciyaalka lasoo korsaday iyo weliba sida laga yeeli lahaa caruurta qaangaartey. Laakiin mar aan la hadlay madaxa xubnaha baarlamaanka ee xisbiga cagaaran waxaa ay ii sheegtay in faahfaahin ay dhowaan soo bixi doonto.
3. Maxaa laga yeelayaa dadka aan wax isku dhalin?
C/risaq: Dadka aan wax isu dhalin waxaa ay ka mid yihiin dadka la doonaayo in xal laga gaaro. Marka maadaama la yiri dadka soomaaliyeed aqoonsi ma keeni karaan ee ha laga dhaafo, dadka aan ilmaha isu dhalina waxaa ay ka mid yihiin dadka soomaaliyeed ee shuruudaan laga dhaafay. Balse weli lama oga iney shuruudo kale ku xiri doonaan iyo in kale. Tusaale ahaan in qofku uu guri haysto ama uu dakhli leeyahay iwm. Dowladu weli waxba ma aaney sheegin balse waxaa muhiim ah in dadka arimhaan u ololeynaayey ay la kulmaan xisbiga cagaaran iyo kuwa dowlada una sharaxaan arinkaan dadka aan wax isu dhalin si aan iyaga hadhow shuruudo kale loogu xirin.
4. Dadkii hore diidmada loo siiyay hada maxay sameyn karaan?
C/risaq: Weli arinkaas iyo sidii la yeeli lahaa wax faahfaahin ahi kama soo bixin. Marka waxaan la socon doonaa heshiiska xisbiga cagaaran iyo dowlada iyo weliba hay àda socdaalka.
Marka ugu horeysa ee aan faahfaahin helona waa la soo gudbin doonaa insha allah.
5. Maxaa la gudboon Soomaalida Sweden?
C/risaq: Dadka waxaa la gudboon iney dadaalkooda sii wadaan. Dadaalkana loo wado qaab siyaasadeed (Diplomacy). Taas waxaan ula jeedaa waa inaan la aamusin ee daladihii iyo dadkii arimahaan u ololeyn jirey waa iney halkoodii kasii wadaan. Waxaan dadka kula talin lahaa in magaalo walbaa ay la kulanto xisbiga cagaaran iyo xisbiyada dowlada si ay noogu sharaxaan qaabka wax loo samayn doono. Waxaa muhiim ah in arinta qoysaska soomaalidu ay tahay mid nool oo taagan ilaa maalinta ay dhaqan gasho. Waxaana aan xooga saari doonaa in sharaxaad laynaga siiyo arimaha aan kor ku soo sheegay oo ah qoysaska aan wax isu dhalin iyo caruurta lasoo korsaday iyo weliba caruurta qaangaartey intii shuruudaan lasoo rogey. Waxaa kale oo iyana muhiim ah in aan dowlada ku dhiiri gelino sidii loo dedejin lahaa middeynta qoysaska kolka sharcigu dhaqan galo. Si aan uga gaashaamano in ay wakhti dheer qaadato imaatinka qoysasku. Mudaaharaad iwm sameyn meyno balse dadaalka siyaasadeed waa inaan sii wadnaa.
6. Dadka qaar ayaa loo diray in ay keenaan warqad cadeyneysa in uu dhintay lamaanahooda. Midaas sidee loo xalin karaa?
C/risaq: Warqadaas waa jirtaa iney dadka weydiiyaan. Balse maadaama ay dowladu tiri waxaan fududayneynaa in caruurta ay waalidkood la midoobaan, waxaan aaminsanahay in aan waraaqo kale la isku xujeyn doonin.
7. Hada ma la xareysan karaa dacwada, mise waxaa la sugayaa ilaa bisha Juli
C/risaq: Dacwada haddaba waa la xeraysan karaa maxaa yeelay waxwalba wakhti bey qaataan.Qofka halka jooga waxaa loo qabanayaa balan waraysi, (intervju). Dadka xagaa afrika joogana sidoo kale. Waxaas oo dhami wakhti bey u baahan yihiin.Marka waa la xereysan karaa baan qabaa.
8. Ma laga yaabaa in arintaan ay dowladu dib uga laabato?
C/risaq: Maya, lagama yaabo.Heshiiska waa la galay, Qorshahaana miisaaniyadii ku bixi lahayd dowladu waa ay sheegtay. Marka suurtogal maaha in laga laabto.
waxaan ahay aqriste la xirira bogan somaliska ee joga addis ababa marka waxaan waydin lahaa mr jimcale waxaa halkaan jira dad wali la siinayo diidmo oo la dhahayo form cusub soo xareeya dadkaas oo wali so maray maxkamad na soo ogolatay inay la midoobaan familkooda misana mar kale soo celisay oo tiri kuma kalsoonin wali somalinimadaada maxaa ay ka yeelayaan dadkaas arinkooda
asc dhamaan shaqaalaha somaliska waxaa kaloo aan gaar u salaamayaa jimcaale oo ninka arimahan aad iskugu xilsaaray aad baanaanu ugu farax sanahay inaad marba nala soo socodsiiso hadba meesha xaal marayo waayo angu waxaanu booqanaa oo kale dadka arimahani khuseeyaan hadaanunahy webkan somaliska marka ugu horaysa waxaananu noqon doonaa macaamiil joogta hadii ala yidhaahdo waayo webku waxa uu ka waramaa arimaha soomalida khuseeya marba arinta u cusub waanay ku mahadsan yihiin shaqaalaha aan marlabaad idhaahdee uu ugu horeeyo jimcaale iyo walaalahay kale ee lashaqeeya waxaan idiin rajaynayaa khayr adinka iyo nagaba waanad salaaman tihiin
Waxaan aad ugu mahad naqayaa mudane C/risaaq oo u war bixiyay si aad u faahfaahsan oo masuuliyadi ku jirto. isagoo kana mid ah dadka hawshan u galay dedaalka oo aan leeyahay halkaas halagasii wado. anigoo naftaydu ka mid ah dhibanayaasha ay carruurtoodii kala maqanyihiin.
waxaan joogaa Nairobi. Shalay qamiis waxaan tagay safaarada Nairobi naag meesha joogto waxey leedahay PLs don.t waste your time and money, sababtoo ah waxaad heleysaa markale reject marka waxaa waaye kiiskeyga in horey la iisiiyey reject hadana la i dhahay soo xaree dacwada markale, naagtu waxey ku doodeysaa in wax sharci ah aan weli la bedelin intii ka horeyso waqtigii la bedeli lahaana waxaan hubaa in hadana diidmo kale aad la kulmeyso oo weli sharcigii hore ayaa shaqeynayaa ee please suga, xitaa shaqadii form qabashada wan joojiney oo waxba kalama socdaan ayey nagu dhahdey, intaasaan kala soo kulmey
thanks walalkeyna aqon yahanka ahowe lkn sual ayan qaba aniga o ah. sanad ka hor aya la i siyay negtavie ama diidmo maxkamada aya dacwadeyda heysato halsano ku dhowad waxa ka codsaday maxkamada in la ika qado dhiig maxkamada neh shiib aye ika tahay weli wax jawab ah ima sinin marka suasheyga waxa waye ma dib aya lo bilawa dacwada mase mesheydi aye ka si soconeysa? wa mahadsantahay aqon yahanka somaliyed
Wad mahadsantìhin dhamantin mudane c/risaq waxa u kadhawajiyay arimo mel badan tabanaya
Salan sare dhaman asxaabta wepkan somaliyey samra juli waxba mahan dhimasha inka xigta mida kale juli ayaga dhahay ilaha kahor arimihina fududeyn dona maxa yelay gaal hadalki waxba mahan e ilaah ku kalsonada wan idin salama dhaman asxabta wepkan lol
asc dhamantiin waan idin salaamay bacda salaan marka aan keego dadaalkii somalidu ugu jirtay in ay u olaleeyaan sidii loo medeyn lahaa reerahooda ka maqan siiba ciyaalka rajo weyn ayaa ka soo iftiintay ,waxana jiray dad dawlada ka tirsan oo masuuliyiin ah in aan la keenin dadka somaliyed hase yeeshe waxa arimahooda kala daadiyey oo meel ay ka maraan waayeen maxaa uga qaadi weyeen DNA kuwii laga qaaday DNA maxaad u diideen hadii wax kale meesha ku jirin, hadda waxa taagan arin kale oo mohiimadu tahay in xoogga la saaro oo ah horta guri iyo shaqo ma haysataa ,arintaas si xoog badan inta goori goor tahay halaga hor tago inay ku fasaxaan oo aad faraxdaan ayey meel aydaan fileyn lug xir iidinka sameyn doonaan oo idinkoo wax la idiin ogolaaday aad oran doontaan tii horeba tanaa nooga daran ,dawlada sweden waa in waxa ay dadka ku xujeyneyso ay noqoto wax ay marka hore iyadu ku guuleysatay oo si fudud lagu heli karo hadii kale waxa soo socda hoo oo ku dhimo arintan waa mdda kaliya oo hadda ay tahay in laga hortago oo aan wax kale laga hadlin,waxa kale oo iftiimin u baahan dadka is qaba ee aan wax isu dhalin iyo dadka la soo korsaday, iyo kuwa la dhalay ee dawlada sweden ay ahayd in ay mar hore DNA ee ka qaado intii ay san gaadhin 18 jir ee maamul xumadooda intii lagu dhex jiray ay dhaafeen 18 jir hadii mar hore DNA laga qaadi lahaa hadda lama yidhaahdeen wey dhaafeen waqtigii DNA laga qaadi lahaa arimahan aan halkan ku qoray waa in somalida sweden joogta ay gudi u sameyso aqoon u leh arimaha swedhiska oo cid kasta kala hadla inta aan la guda galin oo haddna la oran waa in mar kale laga fadhiisto hadii kale meel fog ayaa wax laga doon dooni doonaa.
maryan mj says:
dhamaan bahweedta somaliska.
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay.
halyeeyada hagarla aanta ah oo nokacay wana ilaahey mahadiis dadalkana noowada insha alaah.
anigu markii aan somaliya jogay waxaan aad u jeclaay subaxdii qaxwada oo aan ka bilawi jiray cabitanka.
kkkkk hada waxaa qaxwadii ii badalay wabsedka somaliska inkasto eey igu dhertahay 1 juni
idinkana hanaga dalina eedoyin alaha idiin garab galo.
sorry wan qalday bisha 1juli ayeey ahed waxaan kadhigay 1juni.
halman hadal kumajiro mahad sanidiin
asc mr jimcaali adigo raali ah su al ayan qaba dadka isqaba oo kunol yurub ama an irahdo wexey donayan ina loso warejiyo sweden wax yabo shuruud ah oo lagu xirayo miya jira ama qoys saska africa iyo halkan kala jogo ayey isku sharcii yihiin ama wa ka sharci duwan yihiin ado rali ah arin ka hadii ad wax faa fahin ah hadii ad ka heyso iiga so jawaaaaaab mahad sani diin dhaman shaqalaha somaliska.com
asc dhamaan qasatan waxaan u mahad celinaa baahda somliska
waa arin farxad leh maanta in dhamaan loo is taagay xalin reerha laka maqan
waa qasab hooyo in loo keeno ubadkeeda aabna loo keeno ilmahiisa
arintaas inta ku dadaashay iyo inta u istaagtayba waad wda mahadsan tihiin
waxaan rajeenyaa in baarlamaanka si ugu dhaqsiyaha badan loo xaliyo
arintaan inkastoo sanadka dambo la dhahay hadana taas macquul maaha
waayo sidey ila tahay
asc walal jimcaale waxan ku weyinayaa dadka mar hore intarfiyooga maray oo la diiday keen cadeen la dhahay mar labaad miyaa lagu cilinayaa inuu xareeyo dacwada uu hadaneh in intarfiyooga maro iiga soo jawaab walal mahadsanid
waxaan aad ku faraxsanahay dedaalka ay muujiyeen xildhibaano heer qaran iyo heer degmoba gaar ahaan xusbiga doogga oo aad ula
doobtay in la mideeeyo reeraha soomaaliyeed.
ascw waxan halka ka salamaya c.risaaq m. med xuseen iyo jemcale oo dadhiya warkan dhamantin wa idin salamaya anigu waxan ahay gabar somaliyed oo degan wadan kan iswedan waxa iga maqan nin kagi waxa laysiye didmo labajer marki sadexad dacwadi wa ka xiran tahay aya la igu yiri max kamada aya itiri marka hada ma aniga aya xeranaya fom cusub mase ninkagi aya itopiya ka soxeranaya tankale iiyo hada isaga lama jowabin aniga oo an enterafiyu laga qadin aya la ijowabay lakin isga maya interafiyugina bishi kowad sanadkan ayu maray fadlan wax fahfahin ah isiya
Waad salaaman tihiin. Arimo badan ayaan weli jawaab loo haynin, Ma codsi cusub ayaa la dhiibayaa, haddii qofka dacwadii ka xirantay? ma dacwadii xereysnayd ayaa soconeysa?ma intervju cusub ayaa la qaadi? Ma hadaa foomka la xereynaa mise waa la sugayaa?
Arimahaas oo dhan waxaan ka jawaabi doonaa kolkii ay hayàda socdaalka soo saarto faahfaahin ku saabsan heshiiskaan la gaaray. Anaguna cadaadis baan saareynaa bal in naloo faahfaahiyo arimahaas si uu dadka wel-welku uga dego. Marka ugu horeysa ee khabaar ama war dheeraad ahi soo baxona waa la idiin soo gudbin doonaa.
hinda walaal way jiran waxyalahad ka hadlayso waayo xita aniga waxa lasiyay ninka iqaba maxkamada sare aya igu tiri kiiska ninka aad u dacwatay ma furayno wayo waxan ku qanacnay tii magareshiinka hadana ma fuurayno kiskan wana saad sheegtay oo wey iga xirmatay waxan sameyay dib ayan u xareeyay wana maray intarvyugi bishan aan ku jirno 21ke mahadsanid
hinda waxan ka ilaway waxa laga xarena xaga iyo afrika
asc jimacale iyo bahda somaliska wad mahadsantihiin ha inaga dalinina inagane waxaan fikrad heyno iyo dhiri galin wan idinku soo birineyna qof walbane waxuu cuna cadku allah subxana watacala u qoray
waxaan salaamayaa akhyaarta doorka lama ilaawaankia ka qaadatay arrinta midaynta qoysaska soomaaliyeed intaa isha ayaan ku hayay oo webkan somaliska ayaan kala socday dhamaantiin waad mahadsantihiin.
waxaan aad u jeclahay su,aashan in aad iiga soo jawaabtaan. waxaan ahay aabe jooga wadanka sweden (sverige) marka qofku sharciga qaato ee uu afarta lambar qaatanayo haddii aanu caruurtiisa ka diiwaan gelin skattvarket – ga haddeer ku dhawaad labo sano kadib uu skatt -ka is yidhi ka diiwaan geli oo la yidhi ku qanci mayno waraaqha dhalashada soomaaliya ee caddayn kale keen dacwada caruurtuna magrationka si caadi ah ayay uga socotaa oo markii aan imid sverige ayaan diiwaan geliyay. marka su,aashaydu waxay tahay miyay dacwada wax u dhimaysaa go,aan gaadhida maxaa skattvarket ka uga diiwaan gelin waysay?? waxaan filayaa in lay fahmin waxaan idinka rajaynayaa jawaab.
Waxaan ka cudurdaaranayaa qoraalkii aan soo diray gebagebada waxaan idhi
waxaan filayaa in lay fahmin waxaan uga jeeday waxaan filayaa in lay fahmay.
sidaa u fahma.
arrintaasi muhiim bay ii tahaye iiga soo jawaab. qofku marka arrin uu ka welwelayo dhib ayay ku haysaa.
I love somaliska
allaah ayaa mahadaas iskale waxaana dhamaan dadka soomaaliyeed ugu bishaareenayaa iney dadaalkooda halkaas kasii wadaan mahad naqa allaahna sii wadaan mar walba oo aad tukataana allaah kabaridaan wax san insha allaah asc
Maa shaa allah ilaah ayaa mad leh waxba asaga ayaa gacantiisa ayey ku jirtaa wan ku faraxsanahay in lamideyo reeraha somaliyeed wan farxad iyo reyn usoo hoyotay reraha kala maqan waad mahadsantiihiin webka somaliska
acuudu ben badanidiinaa war dadka beenta ka dhaafa hadii buuw buufis idin dilay dadka hasumey ninka ilaah ka baqa